Liverpool Oo Loo Sheegay Qiimaha Isco, Arsenal Oo U Dhow Saxeex Muhiim A, Man United Oo Beddeshay Qorshaheedii Suuqa Iyo Wararka Ugu Waaweyn Suuqa Iibka Ciyaartoyga Saaka - Gool24.Net
Liverpool Oo Loo Sheegay Qiimaha Isco, Arsenal Oo U Dhow Saxeex Muhiim A, Man United Oo Beddeshay Qorshaheedii Suuqa Iyo Wararka Ugu Waaweyn Suuqa Iibka Ciyaartoyga Saaka
Hal toddobaad oo kaliya ayaa ka hadhay waqtigii uu xidhmayey suuqa iibka ciyaartoyga ee xilliga jiilaalka, waxaana si weyn loo dareemayaa dhaqdhaqaaq ay wadaan naadiyada ugu tunka weyn qaaradda Yurub qaarkooda, gaar ahaan kuwa Premier League.
Kooxaha ayaa waxay raadinayaan ciyaaryahanno kusoo kordhin kara tamar ay hore ugu tallaabsadaan qaybta ka hadhay xili ciyaareedka, isla markaana ka daboola meelihii ay ka liiteen dhawrkii bilood ee hore, kuwaas oo isugu jira amaah iyo heshiisyo xor ah.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu waaweynaa ee xanta suuqa iyo hadal-haynta ugu weyn maanta ee ay wargeysyada qaaradda Yurub ka qoreen suuqa iibka ciyaartoyga.
Manchester United waxa laga yaabaa inay si layaab leh ugu dhaqaaqdo inay dib ula soo saxeexato weeraryahanka Boca Juniors ee Carlos Teves oo 35 jir ah. (Tuttosport)
Tottenham waxay heshiis 20 milyan ah la gashay Inter Milan oo ay ka iibinayso laacibka khadka dhexe ee Christian Eriksen oo 25 jir ah. (Sempreinter.com)
Barcelona ayaa gudbisay dalab ay ku doonayso laacibka reer Denmark ee Eriksen oo ay bishan ka doonayso Tottenham. (Sky Sports)
Liverpool waxay xiisaynaysaa saxeexa laacibka khadka dhexe uga ciyaara Real Madrid ee Isco oo 27 jir ah laakiin kooxda reer Spain waxay ku doonaysaa in 70 Milyan oo Euro inay bixiso Reds. (El Desmarque)
Weeraryahanka reer Gabon ee afka hore uga ciyaara Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang oo 30 jir ah ayaa albaabada u furay kooxda Barcelona oo uu doonayo inuu tago. (Mundo Deportivo)
Dhianca kael, Gunners waxay bartilmaameedsanayaan laacibka khadka dhexe ee reer France ee Thomas Lemar oo ah 24 jir u ciyaara Atletico Madrid. (Express)
Chelsea waxay dib ula furtay wada-hadallo kooxda Lyon oo ay ka doonayso weeraryahanka Moussa Dembele oo 23 jir ah, kaas oo ay doonayso inay bishan soo qaadato haddii ay ku guul-darraysato in ay PSG ka keensato Edinson Cavani oo 32 jir ah. (Sun)
Manchester United ayaa sidoo kale raadinaysa weeraryahanka reer Uruguay ee Cavani oo ay doonayso in bishan uu yimaaddo Old Trafford. (Telegraph)
Heshiiskii Manchester United ay ku doonaysay Bruno Fernandes ayaa istaagay sababtoo ah, kooxda reer England waxay iska diiday inay bixiso lacagta ay Sporting Lisbon doonayso ee ah 68 milyan oo Gini. (Mail)
United waxay wali doonaysaa inay heshiis la gashay khadka dhexe ee Leicester City iyo England ee James Maddison oo 23 jir ah. (Star)
Barcelona iyo Chelsea ayaa isku eryanaya 21 jirka difaaca bidix uga ciyaara kooxda Grasshoper ee Alan Arigoni. (Blick)
Shakhtar Donetsk ayaa ku xidhay Arsenal inay bixiso 30 milyan oo Gini si ay u hesho difaaca reer Ukrain ee Mykola Matviyenko.
Leicester City ayaa iska diidday dalab uga yimid Aston Villa oo amaah ku doonaysay Islam Slimani oo 31 jir ah, waxaanay Foxes doonaysaa in heshiis xor ah kaliya ay ku bixiso maadaama uu hadda laacibka reer Algeria amaah ugu maqan yahay Monaco. (L’Equipe)
Tottenham waxay ku kalsoon tahay inay dhamaystiri doonto heshiiska weeraryahanka Real Sociedad ee Willian Jose, laakiin waxay u baahan tahay inay kordhiso lacagta ay ku dalbatay 28 jirka reer Brazil. (ESPN)
Manchester United waxay dib ugu yeedhanaysaa difaaca reer England ee George Tanner oo ah 20 jir amaah ugu maqan kooxda heerka saddexaad ee Morecambe, waxaanay doonaysaa inay amaah ugu sii darto koox kale. (Manchester Evening News)